December 2011 ~ Nyi Nay Min (Reshare IT knowledge)
Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com. Friday, December 23, 2011
Driver Acer Aspire 5050 for Windows Xp
www.layphyu@gmail.comးကိုညီနေမင်းရေ ကျွန်တော်ကို ကူညီပါအုန်းအကို ကျွန်တော် Acer Aspire 5050 drivers ခွေ မရှိတောလို့ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် လင့်လေးပေးပါနော်အုန်း အကို ကျွန်တော်ဂျီမေးက ပါ...
ကိုလေးဖြူရေ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ. window xp အတွက်ပဲထင်လို့ window xp အတွက်ပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်.
ATI Radeon VGA Realtek Audio Bluetooth
Bison Webcam Sunyin Webcam Cardbus CPU Driver Ethernet LAN Modem Conexant TouchPad
Epson stylus C63, C64, C65, C66 အမျိုးအစားတွေကို counter reset ဘယ်လို လုပ်မလဲ
Answers, printer service program
WTN MYS : ကိုညီ ကျွန်တော်ရဲ့ Printer က Epson C65 ပါ သူအတွက် Resetter က ဘယ်ဟာနဲ့လုပ်ရမှာလဲ ? ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ? ကျေးဇူးပြုပြီးရေးပေးပါတင်ပေးပါခင်ဗျာ... အရင်ဆုံး အောက်မှာ တင်ပေးထားတဲ့ link ကနေ resetter ကို Download လုပ်လိုက်ပါ။
exe ဖိုင်ကို run ပြီးတော့ မိမိသုံးထားတဲ့ epson model ကိုရွေးပေးပြီး ok နှိပ်ပါ. maintenance tab ထဲထဲဝင်ပြီး check waste ink pad counter ကိုနှိပ်ပါ. ပြီးရင် reset ကို ဆက်နှိပ်ပါ. ဒါဆိုရင်ပြီးပါပြီ.
နောက်ပိုင်းတွေမှာ resetter အတွက် တောင်းဆိုတာများ ရှိခဲ့ရင်တော့ အသေးစိတ်မရေးပေးတော့ပါဘူး. ဘာလို့လဲဆိုရင် ကျွန်တော့်ကို printer service လုပ်နေတဲ့ ညီငယ်တော်တော်များများက နေပြီးတော့ မတင်ပေးဖို့အတွက် မေတ္တာရပ်ခံထားတဲ့ မေးလ်တွေ တော်တော်များများ ရောက်လာလို့ပါ. အဲ့ဒီ့အတွက် resetter tools များကိုတော့ တင်ပေးပါ့မယ်. စမ်းတာတော့ ကိုယ့်ဟာကို စမ်းစေချင်ပါတယ်.
Epson stylus C63, C64, C65, C66 အမျိုးအစားတွေကို ...